Azikho iziteleka zamatekisi ezihleliwe ngolwama-Quantum 'okwamanje' | News24
LAST UPDATED: 2019-05-26, 15:27
Azikho iziteleka zamatekisi ezihleliwe ngolwama-Quantum 'okwamanje'
Durban – Angeke sibekhona isiteleka samatekisi "mayelana nokukhuphuka kwenani okuthengwa ngalo amatekisi ohlobo lwe-Toyota Quantum eThekwini okwamanje," kusho iSA National Taxi Council (Santaco) ngoLwesine.
ISantacao ibisabise ngokumisa yonke into ezweni uma aabakhiqizi bamatekisi ohlobo lwama-Toyota Qunatum bengaziphenduli izikhalo zabo ezinsukwini eziyisikhonbisa kusukela ngoLwesithathu olwedlule.
USihlalo weSantaco KwaZulu-Natal, uBoy Zondi, utshele iNews24 ukuthi abakwaTiyota babaphendulile kulandela isiteleka sosomatekisi sangesonto eledluleeThekwini, esadala isiminyamninya emigwaqeni emikhulu, osomatekisi belibangise enkampanini ekhiqiza izimoto zakwaToyota eProspecton, eSipingi.
OLUNYE UDABA: Kuphume isidumbu, kwalimala abaningi kushayisana amatekisi
Bebetelekele "ukukhuphuka kwenani lamatekisi okuthengiswa ngalo amatekisi ohlobo lwe-Toyota Quantum selokhu athulwa kuleli eminyakeni eyishumi eyedlule".
Ngesikhathi efika lawa matekisi kuleli, ayebiza u-R220 000 ekubeni ayakhiwa ngaphandle kodwa manje asebiza u-R450 000 ngaphambi kwenzalo nakuba esekhiqizwa kuleli, nokwenza le mboni ibone sengathi kudlalwa ngayo, kusho iSantaco.
Ngokwezibalo zale nhlangano, iToyota Quantum ibiza imali engaphezu kwengu-R1 million uma sekubalwa i-diphozithi, inzalo, umshwalenze nokunye.
UZondi uthe bafuna abakwaToyota balibeke ku-R350 000 inani lamatekisi ohlobo lweQuantum.
"Babuyelile kuthina kanti sisaphakathi kwezingxoxo. AbakwaToyota bahlele ukubamba umhlangano kanye nathi, ozobanjwa ngoLwesithathu," kusho uZondi.
Isiteleka sangoLwesithathu olwedlule sasingachazi ukuthi kumele kuvalwe inkampani ezweni, kodwa "Sasizama ukubeka iphuzu", kusho uZondi.
"Asisho ukuthi abakwaToyota abavale inkampani, asikwazi ukuphuca abantu abangaka isinkwa," kusho uZondi, eqhuba ngokuthi bazama ukubonisana nabakwaToyota.
UZondi ukuphikile ukuthi isiteleka samatekisi e-Orlando ngoLwesibili besihlobene nenani lwamatekisi ohlobo lwama-Quantum, njengoba abanye bezindaba bebebikile.
"Akusilo iqiniso ukuthi isiteleka saseGauteng besihlobene nesiteleka ebesinaso eThekwini. Bebelwela izizathu ezaziwa yibo kuphela," usho njalo.
UZondi ube esehlaeumbisela ukuthi, ngomhlaka-15 Juni, osomatekisi bangase bamashele emahhovisi e-SA Taxi Finance eGoli " ngokukhuphuka kwenani okuthengiswa kwamatekisi ohlobo lwe-Toyota Quantum".
Inews42 ikholwa wukuthi iSantaco ibambe umhlangano eGauteng kuleli sonto ngesiteleka esihleliwe.
"Okwamanje, sifaka isicelo sokuthola imvume yokubamba isiteleka esisemthethwni eGoli ngomhlaka-15 Juni," kuqhuba uZondi.